अ’चानक ह्वात्तै बढ्यो आलुको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस – – Life Nepali
अ’चानक ह्वात्तै बढ्यो आलुको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस –
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङदेवा बुङकुलुङ भोटेगाउँका क्रिक्या शेर्पाले भदौ दोस्रो साता सुवास आचार्यलाई ९० किलो आलु बेचे । घरमै आएका उनलाई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा दिए । उसिनेर खान मिल्ने किसिमका ठुल्ठूला दाना आलु पाएका आचार्य सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ पुगेपछि खरिदका लागि यहाँ पुगेका थिए । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
त्यसैले एक सय नै भन्न थालेका छौं ।’ आलुको पकेट क्षेत्र बुङकुलुङको दूरी सदरमुकाम फुङलिङबाट नौ किलोमिटर छ । ८ किलोमिटर पक्की सडक छ । एक किलोमिटर मात्रै कच्ची छ । आलुको मात्रै खेती हुने हिमाली क्षेत्रमा यति बेला धमाधम उत्पादन भइरहेको छ । सदरमुकाम फुङलिङकै माथिल्लो फेदी क्षेत्र, फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेपको घुन्सा, वडा नम्बर ७ ओलाङचुङगोला र याङमामा आलु उत्पादन हुन थालेको छ । यी क्षेत्रमा एक सिजनमा आलु र अर्को सिजनमा जौ, गहुँ, उवा, फापरलगायतको खेती हुन्छ ।
कञ्चनजंघा क्षेत्रमा आउने १३ सय हाराहारीका विदेशी, उनीहरूसँगै आउने गाइड, भरिया, सबैको मुख्य तरकारी आलु खपत नभए पनि सदरमुकाम आसपासमा मूल्य अचाक्ली बढेको छ । विगतमा कात्तिक–मंसिरका बेला पर्ने मूल्य यसपाला भदौमै परेको स्थानीय बताउँछन् । उत्पादन घट्नु र लकडाउनका बेला बढी खपत हुनु मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भएको आलु पकेट क्षेत्रका पाशाङरिता शेर्पाको भनाइ छ ।
Previous एकै परिवारका ३ जनाको ज्या’न गयको घ’ट्नाको बारेमा २४ घण्टा नहुँदै खुल्यो र’ह’स्य –
Next OMG नेपालमा आज एकैदिन यति धेरै कोरोना संक्रमित थपिए !